Imtixaanka Iskudhinta Galmada ee Ragga - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Imtixaanka Galmada ee Ragga
Adiga ama qof kuu dhow miyuu dhibaato kaa haystaa? Qaybtani waxay bixisaa imtixaanka waxqabadka galmada ee fudud. Waxay ka caawin kartaa ragga inay gartaan in ay porn-ka internetka tahay qayb ka mid ah dhibaatooyinka waxqabadka jinsiga ah ee ay yeelan karaan.
Imtixaanka waxqabadka ragga
Tani waa tijaabo sahlan oo aad sameysid nin si aad u aragto haddii porn uu la xiriiro dhibaatada waxqabadka galmada. Waxaa soo saaray Gary Wilson si ay uga caawiso ragga in ay ogaadaan haddii waxqabadka galmada ee jilicsan ay la xiriirto isticmaalka sigaarka ama ka soo horjeeda halkii laga soo gudbin lahaa walaaca.
1. Marka hore, fiiri jimicsi wanaagsan oo ka taliya wixii caafimaad darro ah.
2. Marka xigta, hal mar ayaa siigaysanaya porno aad ugu jeceshahay (ama si fudud u sawiro sida ay ahayd hadaad dhaaratay).
3. Ka dib, mar kale mar kale waa la xiiraa aan lahayn porno iyo iyada oo aan u maleynayo ku saabsan porn.
Isbarbardhig tayada ereyadaada iyo wakhtigii ay ku qaadatay duufaanta (haddii aad kari karto). Nin dhalinyaro ah oo caafimaad qaba waa in uu dhib ku qabaa helitaanka kacsan buuxa oo uu ku riixo orgasm la'aan aan lahayn laxiriir ama leexasho.
Haddii aad leedahay dhirto xooggan oo ku jirta #2, laakiin erectile xoojinta ee #3, ka dib waxaa laga yaabaa inaad leedahay Porn-Caused Erectile Disfunction (PIED). Waxaad u baahan tahay inaad joojiso isticmaalka lebbiska internetka. Hay'adda Abaalmarinta Reward saddexda nooc ee soo kabashada waxaa lagu talinayaa.
Haddii #3 uu yahay mid xoog badan oo adag, laakiin waxaad la kulantaa lamaanaha dhabta ah, markaa waxaad u maleyneysaa ED-da la xariira welwelka.
Haddii ay dhibaato kaa haysato muddada #2 iyo # 3 labadaba, waxaa laga yaabaa inaad leedahay Horumarinta Porn-ka ee Horumarinta leh ama dhibaato hoose ee suunka oo aad u baahan tahay gargaar caafimaad.